.NET 5 wuxuu la yimaadaa taageerada Linux iyo WebAssembly | Laga soo bilaabo Linux
.NET 5 wuxuu la yimaadaa Linux iyo taageerada WebAssembly
Microsoft ayaa daaha laga qaaday dhawaan iyada oo loo marayo boostada blog, sii deynta a nooc cusub oo cusub .NET 5 madal maxaa bixiya taageerada Linux, macOS, iyo WebAssembly.
.NET 5 waxay siisaa dadka isticmaala hal qaab furan iyo waqtiga shaqada taas oo loo adeegsan karo aagagga kala duwan ee horumarka iyo barnaamijyada kala duwan. Nooca .NET 5 wuxuu ka kooban yahay mideynta Qaab dhismeedka .NET, .NET Core iyo Mono. Iyada oo .NET 5, waxaad ku abuuri kartaa barnaamijyo iskudhaf ah adigoo adeegsanaya hal saldhig oo koodh ah iyo habka qorista guud, iyadoon loo eegin nooca dalabka.
Sheyga .NET 5 sii wadida horumarka mashruuca isha furan .NET Core 3.0 waxayna bedeshay Qaabdhismeedka .NET Framework, oo aan mar dambe si gooni gooni ah loo horumarin doonin lana joojin doono marka la siidaayo .NET Framework 4.8. Dhamaan horumarka laxiriira
.NET waxay hada diirada saareysaa .NET Core project oo ay kamid yihiin Runtime, JIT, AOT, GC, BCL (Base Class Library), C #, VB.NET, F #, ASP.NET, Qaabdhismeedka Hay'ad, ML.NET, WinForms, WPF, iyo Xamarin. Nooca soo socda ee .NET 6, mashruucyada Xamarin iyo Mono ayaa lagu dari doonaa si loo taageero barnaamijyada iOS iyo Android.
Sida .NET Core, NET 5 markab oo wata CoreCLR Runtime oo ay weheliso iskuxiraha RyuJIT JIT, maktabadaha caadiga ah, CoreFX, WPF, Foomamka Windows, WinUI, Qaabdhismeedka Haykalka, iskuxirka khadka amarka dotnet, qaabdhismeedka loogu talagalay horumarinta WPF iyo codsiyada macaamiisha Foomamka Windows iyo sidoo kale aaladaha lagu horumariyo microservices, maktabadaha, server-ka, codsiyada garaafyada iyo kombuyuutarka.
NET 5.0 waa noocii ugu horeeyey ee socdaalkeena midaynta .NET. Waxaan abuurnay .NET 5.0 si loogu oggolaado koox aad u tiro badan oo horumariyayaal ah inay ka haajiraan koodhkooda iyo barnaamijyadooda Nidaamka .NET ee .NET 5.0. Waxaan sidoo kale wax badan ka qabanay shaqadii bilowga ahayd 5.0 si ay dadka wax dhisaya ee Xamarin u isticmaali karaan barnaamjka mideysan .NET markaan sii deyno .NET 6.0. Waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan mideynta .NET dambe ee boostada.
Hadda waa wakhti ku habboon in la muujiyo wada-shaqeynta cajiibka ah ee lala yeesho qof kasta oo gacan ka geysta mashruuca .NET. Sii deyntaani waxay ka dhigan tahay sii deyntii shanaad ee weyn ee .NET mashruuc il furan ah. Maanta, waxaa jira iskudhaf weyn oo shakhsiyaad iyo shirkado yaryar iyo kuwa waaweyn ah (oo ay kujiraan kafaala qaadayaasha shirkadaha ee .NET Foundation) oo kawada shaqeynaya bulsho weyn dhinacyo kala duwan oo ah .NET ururka dotnet ee GitHub. Horumarinta ka jirta .NET 5.0 waa natiijada dad badan, dadaalkooda, fikradaha caqliga badan, iyo daryeelkooda iyo jaceylka ay u qabaan barnaamiijka, dhamaan wixii ka baxsan jihada Microsoft ee mashruuca Laga soo bilaabo kooxda aasaasiga ah ee ka shaqeysa .NET maalin kasta, waxaan u fidineynaa "mahadsanid" weyn qof walba oo gacan ka geystey .NET 5.0 (iyo noocyadii hore)!
Isku soo wada duub JIT, nooc cusub ayaa bixiya qaab horumarsan oo ku saleysan LLVM koodhka mashiinka WebAssembly iyo bytecode (Mono AOT iyo Blazor waxaa loo isticmaalaa si joogto ah).
Waxqabadka ee madal kala duwan iyo qaybaha maktabaddas aad buu u kordhay (gaar ahaan xawaareynta JSON serialization, regex, iyo howlaha HttpClient).
Ka jawaab celinta ayaa lagu wanaajiyey iyadoo la cusbooneysiiyey qashinka ururiya. Macaamiisha ClickOnce ee gudaha ku jirta ee daabacaadda arjiga degdegga ah. Wixii Linux iyo macOS ah, Nidaamka API.DirectoryServices.
Habmaamuuska ayaa loo qaabeeyey inuu la shaqeeyo LDAP iyo Active Directory. Wixii Linux ah, taageerada codsiyada hal-feyl ah ayaa sidoo kale lagu daray, taas oo dhammaan qaybaha iyo ku-tiirsanaanta lagu buuxinayo hal feyl.
Xirmo loogu talagalay horumarinta barnaamijyada shabakadda ASP.NET Core 5.0 iyo lakabka ORM Entity Framework Core 5.0 (darawalada, oo ay ku jiraan SQLite iyo PostgreSQL) ayaa si gooni ah loo sii daayay, iyo sidoo kale noocyo luqadeed C # 9 iyo F # 5. C # 9 waxaa ku jira taageerida matoorrada koodhka ilaha, barnaamijyada heerka ugu sarreeya, qaabab cusub, iyo nooca fasalka diiwaangelinta.
Taageerada .NET 5.0 iyo C # 9 horeyba loogu soo daray tifaftiraha muuqaalka Studio-ga Visual Studio oo bilaash ah.
Ugu dambeyntii, Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato ku dhawaaqista .NET 5, waxaad ka eegi kartaa faahfaahinta xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Barnaamijka » .NET 5 wuxuu la yimaadaa Linux iyo taageerada WebAssembly
CrowdSec: waa mashruuc furan oo iskaashi xagga amniga ah oo loogu talagalay Linux
Malaayiin qalabka Android ah ma taageeri doonaan shahaadooyinka Aynu Encrypt ee 2021